Weerar Askar badan lagu dilay oo ka dhacay bartamaha Maali.
Wednesday October 14, 2020 - 19:04:28 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaalyahannada Jamaacada Ugargaaridda Islaamka iyo Muslimiinta ayaa fuliyay weeraro hor leh oo ay ku beegsanayso mid kamida ciidamada cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee duullaanka ku qaaday mandiqadda Saaxilka qaaradda Afrika ee muslimiintu ay le
Dagaalyahannada Jamaacada Ugargaaridda Islaamka iyo Muslimiinta ayaa fuliyay weeraro hor leh oo ay ku beegsanayso mid kamida ciidamada cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee duullaanka ku qaaday mandiqadda Saaxilka qaaradda Afrika ee muslimiintu ay leeyihiin.
Wararka ka imaanaya bartamaha dalka Maali ayaa sheegaya in weerar cusub oo ka dhacay gobolka Mopti lagu dilay tobaneeyo askari oo katirsan ciidamada xukuumadda dabadhilifka ah.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in laba weerar oo dhacay maalmihii Isniinta iyo talaalada lagu dilay ugu yaraan 14 askari halka 11 kale ay dhaawacyo soo gaareen.
Xoogag aad uhubaysan ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday saldhig melleteri oo kuyaal wilaayada Mopti, wararka ayaa intaas ku daraya in 3 gaari oo nuuca dagaalka ah ay mujaahidiintu ku buburiyeen weerarka iyadoona gabi ahaanba laburburiyay saldhiggii laweeraray.
Afhayeen uhadlay melleteriga Maali ayaa wakaaladda wararka Faransiiska u xaqiijiyay in 9 askari looga dilay weerar gaadma ah oo ay fuliyeen kooxo uu ugu yeeray argagaxiso halis ah.
Weerarkan oo ka dhacay meel ku dhow xuduud beenaadka ay wadaagaan Maali iyo Burkina Faso ayaa kusoo aaday waqti xasaasi ah oo si weyn loo hadal hayo maxaabiis isweydaarsigii weynaa ee dhowaan dhaxmaray mujaahidiinta iyo dowladaha reergalbeedka oo gadaal ka taagnaa xukuumadda Maali.
Sidoo kale wararka laga helayo waqooyiga Maali ayaa sheegaya in qarax miino lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamada waxa loogu yeero Q.Midoobay ee soo duulayaasha ah, wararku waxay sheegayaan in gaari nuuca gaashaaman ah uu qaraxu haleelay balse aan la ogeyn khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qaraxa.